zaw moe၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
zaw moe's Apps
zaw moe's Likes
zaw moe's Discussions
Started this discussion. Last reply by Ashin Pannavamsa မေ 31, 2015.4Replies 1 Like
zaw moe သည်လက်ဆောင်မရရှိသေးပါ။
ကိုမျိုးအောင် liked zaw moe's discussion အတက်သိက ဖြေကြားပေးပါဘရား
မေ 6, 2016
Ashin Pannavamsa replied to zaw moe's discussion 'အတက်သိက ဖြေကြားပေးပါဘရား'
"သ​မေတီတိသမ​ထော။ စိတ်​ကိုငြိမ်​သက်​​စေတတ်​လို့သမထတဲ့။ စိတ်​ကို အာရုံတစ်​ခုတည်းမှာ စွဲမြဲ​နေ​အောင်​အားထုတ်​ရတာကို သမထလို့​ခေါ်ပြီး ဝိပဿနာက​တော့ ဝိက အထူးထူးအပြားပြား ပဿကရှု​ကြောင်းဖြစ်​လို့ ဝိပဿနာ​ခေါ်တယ်​တဲ့။ အဖွင့်​​တွေလည်းအများကြီးရှိ​သေးတယ်​။…"
မေ 31, 2015
ဖိုးအော် replied to zaw moe's discussion 'အတက်သိက ဖြေကြားပေးပါဘရား'
"ကျနော်က နည်းနည်းပဲလုပ်ဖူးလို့ နည်းနည်းပဲပြောပေးနိုင်မယ်ထင်တယ် အတိအကျတော့ မဟုက်ဘူးဆိုလည်းရတယ် ဟုက်တယ်ဆိုလည်းရတယ် သမထဆိုတာက အာရုံတစ်ခုကို အခိုင်အမာစွဲထင်နေအောင် လုပ်ရတဲ့အလုပ်မို့ သူ့မှာဖြစ်ခြင်းသဘောတရားတွေကများနေတယ် ပျက်ခြင်းသဘောကို…"
zaw moe replied to zaw moe's discussion 'အတက်သိက ဖြေကြားပေးပါဘရား'
"ရိပ်သာကို သွားလေ့ရှိတဲ့အမျိုးတွေဆီက ကျေနပ်လောက်တဲ့အဖြေမရလို့ပါဗျာ"
နေလင်းစိုး replied to zaw moe's discussion 'အတက်သိက ဖြေကြားပေးပါဘရား'
"ရေရဲ့အတိမ်အနက်ကို သိချင်တဲ့သူက ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြည့်မှ တိတိကျကျ သိနိုင်သလို သမထ ၀ိပဿနာ ကိုသိချင်ရင်လည်းလွယ်ပါတယ် ရိပ်သာတွေမှာ ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေဗျာ....."
zaw moe postedadiscussion
zaw moe သည်မူကြိုဆရာ's ၏ 'စွန်းလွန်း ဆရာတော် ဘုရား၏ ဝေဒနာ ရှုကွက်' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
zaw moe သည်မူကြိုဆရာ's ၏ 'အဘိဓမ္မာ နှင့် ၀ိပဿနာ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
phyuthi သည်zaw moeကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
zaw moe postedastatus
"ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကြိုတာနောက်ကျခဲ့သည်ရှိသော်နားလည်ပေးရန်အနူးအညွတ် တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ရှင် ။မိမိမေလ်းထဲမှ သူငယ်ချင်းများကို( ဤနေရာကိုကလစ်၍…"
zaw moe ဓမ္မ မိတ်ဆွေအသစ်တစ်ယောက်ကို ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺မှနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်
7:15pm အချိန်သြဂုတ် 2, 2014, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
9:46pm အချိန်မတ် 23, 2014, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။